Mutemo weChitsotsi | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Mutemo wemhosva
Ndiani ane kodzero yekuitisa kubvunzurudza munyaya yezvakaipa mumamiriro ehurumende mukati? Ndeupi musiyano pakati pechiremera chemuviri
Ndiani ane mvumo yekuita kubvunza mune yemhosva mhosva mune zvemukati mitezo miviri? Ndeupi musiyano uripo pakati pemutumbi wekubvunza Maererano nemaitiro eRussia matsotsi, mitumbi ine mvumo yekuita mibvunzo inosanganisira:
Ini ndakadanwa sechapupu pane chinyorwa 188 cheMitemo yeNzira yeChivi
Ndiri kushevedzwa sechapupu pasi peChinyorwa 188 cheRF Code yeCriminal Procedure. Zviri nyore. Kana uchida kuenda, enda. Iwe haudi kuenda, asi ivo vanogona kuzivisa yako yekutyaira uye vauye nayo nechisimba nerubatsiro rwe ...
Unogona here kutsanangura musiyano uripo pakati pe "kuiswa mutirongo", "kurambidzwa kwerusununguko" uye kuti vangashandiswe sei panguva imwe chete
Unogona here kutsanangura musiyano uripo pakati pe "kuiswa mutirongo", "kurambidzwa kwerusununguko" uye kuti vangashandiswe sei panguva imwe chete? Muchidimbu, mushure mekusungwa, ivo vachapfekawo bracelet yegore, uye nguva yekudzoka kumba kwake ne ...
Ndezvipi zvinopesana nemutemo, pakati pemhirizhonga, kuba uye kuba, pamwe nekupamba nekubavha?
Ndeupi musiyano wepamutemo, Pakati pekuba, kuba uye kuba, uye kuba? misiyano iri munzira inoitwa nemhosva, kuomarara uye mhedzisiro. Asi idzi dzese inzira dzekuba midziyo yemumwe munhu ...
Ndakanzwa kuti iwe unogona kudzidza paInternet apo mutongi ari kushumira mutongo
Ndakanzwa kuti unogona kutsvaga paInternet panowanikwa mutongi ari kutongera vamwe vasungwa. Ru Kusvika pamwero wekuti vanhu havana ruzivo. Hongu, ktozh ichaburitsa ruzivo rwakadai mu internet. Sasim morons ANOPINDA here? kazhinji…
Ndeipi chikamu chekuvhiringidza kwekodzero?
ndeupi mutongo wekutyora kodzero? Art. 146 yeCriminal Code yeRussian Federation. Kutyorwa kwekodzero uye kodzero dzakabatana. Chikamu 1. Kupa kwemunyori (kubiridzira), kana chiitiko ichi chakakonzera kukuvadza kukuru kumunyori kana ...
Batsira kubvisa kupara kwemhosva kuburikidza nemusoro wemusoro weRussian Federation
Batsira kubvarura kuumbwa kwemhosva uchishandisa musoro kodhi weRussian Federation mhosva dzinopesana nebasa remauto - chidzidzo chakakosha, avo vemauto - munhu asvika zera rekumanikidzwa, makore gumi nemasere. pane…
Chisungo 186 UK RF
Chinyorwa 186 cheCriminal Code yeRussian Federation Zvinoenderana neArt. 99 yeCriminal Procedure Code yeRussian Federation Paunenge uchifunga nezve kudiwa kwekusarudza nzira yekudzivirira inopokana nemunhu anenge achifungidzirwa kana kupomerwa kuita mhosva nekuiona ...
Ndeipi chirango che LLC kune chekuvanza mari uye kubhadhara mutero?
ndeipi chirango kune iyo LLC yekuvanza mari uye kusabhadhara mutero pavari? wakanaka Basa remubhadhari wekutyora mutemo wemitero Matanho ekupindura nekukurumidza. Kumiswa kwemabhengi mashandiro kana zvikakundikana kupa mutero ...
Ndeipi chirango chingava chekushandisa mbanje, kana izvi zvisati zvambove pasina motokari uye iwe usati wakanyoreswa?
chirango chipi chingavapo chekushandisa mbanje dai pasina madhiraivho kare uye iwe usina kunyoreswa? Iko hakuna mhosva yematsotsi muRussian Federation Administrative :: Chinyorwa 6.9. Kushandisa zvinodhaka ...
Ndezvipi zviyero zvakanyanya zvakagadzirirwa zvombo zvinotonhora?
Ndeapi matanho makuru ekugadzirisa zvombo zvakarodzwa? Mubvunzo wekupatsanura chakasarudzika sechombo chemaoko chinogadziriswa chete zvichibva pamhedzisiro yeongororo yekuongorora kana chitupa (mienzaniso: 1, 2). Nyanzvi dzinotungamirwa ne ...
boka rekutsvaga rakagadzirwa sei?
Boka rekuongorora-rinoshanda rinoumbwa sei? Zvichienderana nemhando yenyaya inofanira kuferefetwa. Kuwanda uye kugadzirwa kwemhando kwakatemwa. Saizvozvo, vaongorori vane ruzivo rwakati, nyanzvi dzakasiyana, huwandu hwevashandi vanoshanda, mater-tech zvinoreva ...
Ndeipi chirango chinorayirwa nemutemo nekuda kwekutyisidzira kwechisimba?
Ndeupi mutongo wepamutemo wekutyisidzira kukuvara mumuviri? Chinyorwa 119. Kutyisidzira nekuponda kana kukuvadza muviri zvakanyanya. Uye zvakare, muchiitiko chekuti zviito zvakadaro zvinokumanikidza kuti uite zviito zvinopesana nekuda ...
Vari kusungwa nekuda kwekushandisa steroids here?
Iwe unokandwa mutirongo nekuda kwekushandisa steroids? hatina chinyorwa 234 cheCriminal Code yeRussia Kutenderera zvisiri pamutemo kwezvinhu zvine simba kana zvine chepfu zvekushambadzira. Chikamu 1. Kugadzira zvisiri pamutemo, kugadzira, kutora, kuchengetedza, ...
Vangani vatongi vari mumatare edzimutemo?
Vatongi vangani variko mudare rebumbiro? Ehe, pane akawanda seanosvika gumi nematanhatu eaya mahara freeloader. Bumbiro reRussian Federation raZvita 19, 12 rakasimbisa kuti Bumbiro reMutemo reRussian Federation rine vatongi gumi nemapfumbamwe ...
Chii chinonzi tattoo chekavharo pamakumbo
Zvinorevei kuti tattoo yemashizha emucheka paruoko zvinomiririrei? Chiratidzo cheshizha remapuri mune hunyanzvi hwekumabvazuva uye mumatato kunyanya zvinoreva matsutso. Ichowo chiratidzo chevadi (muChina neJapan). ...
Chikumbiro Chii? Chikumbiro chekubvunzurudza zvapupu, uchave nekodzero kana iwe ukava muongorori Unogona - ona chinyorwa 56 cheCriminal Code yeRussia Federation Chapupu chine mvumo yeku:
chii chinonzi "pre-research check"? zvakafanira mune zvese zviitiko zvekuonekwa
chii chinonzi "pre-research check"? kuitisa nguva dzese dzekuonekwa.Kuitisa pre-kuferefeta cheki hakusi kwekumanikidzwa mune zvese zviitiko. Semuenzaniso, kana chitunha chejaya rikawanikwa riine banga mumoyo kana bara ...
Ndokumbira undiudze ... chinyorwa 228/1 chikamu 4 ... vangapa marii kana kekutanga ivo vasina kubatanidzwa uye vasingashandise?
Ndokumbira undiudze ... chinyorwa 228/1 chikamu 4 ... vangapa marii kana kekutanga ivo vasina kubatanidzwa uye vasingashandise? Chikamu 4 cheArt. 228.1 yeCriminal Code yeRussia Federation inopa chirango muchimiro chekuiswa mutirongo kubva gumi ...
Uye ... Zvose zvakafanana, iwe unofunga Yevgeny Podbutsky achaiswa mujeri nokuda kwokunyengedza Yulia Sidorenko?
Uye ... Kunyange zvakadaro, iwe unofungei, Yevgeny Podbutsky achapfigirwa mutirongo nekuda kwekunyengera Yulia Sidorenko? Murume akaberekerwa musikana wechikoro ane makore gumi nematatu anotiza kurangwa ... Vemunyika vanotenda: amai vadiki pachavo hava ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,580 masekondi.